Fashion Archives - Shop
Shop > All Articles > Fashion
How to dress up likeaPRADA Model with Shop App031
The KaungHtet May 13, 2022 7:37 am May 13, 2022
ကောငျးမှနျစှာဝတျစားဆငျယငျခွငျးက ကောငျးမှနျတဲ့ခံစားခကျြမြားကိုပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ဒါ‌‌ကွောငျ့ နစေ့ဥျလှုပျရှားသှားလာမှုတိုငျးမှာ ကောငျးမှနျသောဝတျစားဆငျယငျမှုရှိဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ဒီတဈပတျမှာ Shop App နဲ့အတူ PRADA Brand ရဲ့ Model တဈယောကျလို စမတျကနြစှာဝတျဆငျရမလဲဆိုတာ ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈလို့ အခုပဲကွညျ့လိုကျရအောငျ! IF YOU LOOK GOOD, …
Fashion, Fashion, Lifestyle, Others
2022 Fashion Trends and Tips – ၂၀၂၂ တှငျခတျေစားလာမယျ့ ဖကျရှငျမြား2146
The KaungHtet January 25, 2022 4:04 am January 27, 2022
၂၀၂၂ ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးတှငျ စီး‌‌မွောပွီး ခတျေစားလာမယျ့ ‌Trends ၉ ခုနဲ့ Tips တခြို့ကို Shop App MM ရဲ့ ဒီတဈပတျ ဖကျရှငျကဏ်ဍ မှ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ “Personal Image” အကွောငျးမြှ‌ဝပေေးသှားတဲ့ …
New Year, New Fashion Resolution 20220326
The KaungHtet January 20, 2022 5:35 am January 25, 2022
Every new year is defined asanew beginning of almost everything including new fashion and new closet. The year …
International Fashion Brand ၆ခု ကိုဈေးတန်တန်နဲ့ Thingyan Sale အတွင်း ဝယ်ကြမယ်။0436
The KaungHtet March 29, 2018 11:18 am May 3, 2018
သင်္ကြန်မှာလူအများကြားထင်ပေါ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရွှေမှုန်ရတီ ဘဏ်အကောင့်မလိုဘူးဆိုတာ သိပြီးပြီလား။ တချို့ကပြောကြတယ် သင်္ကြန်ရေစိုမှာပဲ ဖက်ရှင်တွေမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဖက်ရှင်အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူတွေက ရေကစားတာတောင်မှ အထာကျကျဖက်ရှင်မပြတ် ကစားလို့ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ရေတွေရွှဲစိုနေတဲ့အချိန်မှာ စတိုင်ကျကျနေဖို့ဆိုတာ ရိုးရိုး skill လောက်နဲ့မရပါဘူးနော်။ သေချာဂရုမစိုက်ရင် လူတကာရယ်တဲ့ …
Valentine’s Day နေ့ကို Gigi Hadid၊ Kendall Jenner တို့ကဲ့သို့ဖြတ်သန်းချင်ပါသလား။0315
၉၀%အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့အတူ Shop.com.mmရဲ့ Fashion Sales 2017ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီး စတင်နေပါပြီ….0291
ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေနဲ့ အလှကြိုက်တဲ့ပျိုမေတို့အတွက် စက်တင်ဘာလက ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမှာ အမှန်ပါပဲနော်…Shop.com.mm က customer တွေအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားဖန်တီးပေးလျက်ရှိတဲ့ Online Shopping တစ်ခုပါ။ အခုဆိုရင် Shop.com.mm က ၂၀၁၇ခုနှစ်ရဲ့ …
ရာသီမရွေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် UNT ဖက်ရှင်0326
The KaungHtet August 30, 2017 4:41 am August 30, 2017
လေဒီတို့အတွက် သတင်းကောင်း…ပျိုမေတို့အသဲစွဲ မြန်မာဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNT collection ကို Shop.com.mm မှာ ရောင်းချပေးနေပါပြီ…UNT collection က မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဖက်ရှင်၊ အလှအပရေးရာနဲ့ Lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်း၊ ဗဟုသုတလဲရစေတဲ့ ဘလော့တွေကို …
ဖက်ရှင်ချစ်သူတို့အတွက် Uptownie 101 အမှတ်တံဆိပ် အဝတ်အထည်များ0278
The KaungHtet June 16, 2017 10:01 am June 16, 2017
လေဒီတို့ရေ…ဒီတခါမှာတော့ မကြာသေးခင်က Shop.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ စတင်ရောင်းချလိုက်တဲ့ Uptownie 101 ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီတံဆိပ်ကို မြန်မာပြည်မှာ သိတဲ့သူရှားပါလိမ့်မယ်…သူက အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကို အခြေခံကာ အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ အဝတ်အထည်တွေနဲ့ ဖက်ရှင်ပစ္စည်းတွေကို …